Maxay tahay maalgelinta kadib? Fiiri qeexida Lexicon Financial
Ilmaha & Ilmaha
Nafaqada & Daryeelka
Waqtiyada firaaqada iyo safarka
Cosmetics & nadaafadda
Daabac & Sawir
TV & Cinwaanka Guriga
Qalabka beerta & qalabka beerta
qalabka korontada Large
Khamiista, Febraayo 27, 2020
Soo dhawow! Gal cinwaankaaga
Furaha sirta ah ayaa e-mayl loogu soo diri doonaa.
oo dhanNafaqada & DaryeelkaWaqtiyada firaaqada iyo safarkaxanaanadaammaankaalaabta
Gawaarida dhismaha ee LENA Worxx
Diyaaradaha aan la xakamaynin
oo dhanRaalli ahaanshahacaafimaadkasalaaxidCosmetics & nadaafaddasupplements nafaqada
Waa maxay sababta ay qiimo u iibsato qaxwada organic?
Daboolida kursiga miisaanka
oo dhanAudio & HifiComputerDaabac & SawirciyaarahamobilekaleTV & Cinwaanka Guriga
oo dhanLeisure GardenQalabka beerta & qalabka beertawarshad
Shidaal vacuum caleen
oo dhanqalabka korontada Largeqalabkaqalabka jikadaku nool
La-taliyaha Booqdaha Hubin
Start daymaha -Leaks maalgelinta dheeriga ah
maalgelinta dheeriga ah
Maxay tahay maalgelinta kadib?
ka maalgelinta dheeriga ah gaar ahaan saameeyaha dhismayaasha guryaha. Bilawga marxaladda dhismaha, ama laga yaabee xitaa ka hor qorshaynta dhabta ah, waxay amaahday deyn loogu talogalay oo kaliya loogu talagalay guriga mustaqbalka. Hadda waxay dhici kartaa inta lagu guda jiro marxaladaha dhismaha ee shakhsiga ah ee lacagta ay si fudud u baxdo sababtoo ah maaddooyinka si khalad ah loo xisaabiyay ama sabab kale oo dhacday. Maxaa markaas Xaaladdan, maalgelin dheeraad ah waa in laga codsadaa bangiga. Dhismayaasha badankood tani maaha dhibaato. Qofkii dhisi gurigiisa hubaal ma heysto khayraadka maaliyadeed, sidaas darteed waa in uu mar kale dalbado lacag. Marka taasi dhacdo, dadka badankood waxay la kulmaan dhibaatada dhaqaale.
Sababtoo ah bangigu sidoo kale wuu dhaafi karaa oo diidi karaa inuu bixiyo deeq maaliyadeed kadib. Dhismayaasha waxay ku jiraan waajibaadka waana inay sheegaan waxa dhacaya lacagta ugu horreysa ee deynta. Dhammaan kharashyada waa in mar walba lagu caddeeyaa dukumentiyada ku habboon. Deyn-bixiyeyaashu waxay codsan karaan maal-gelin dheeraad ah waqti kasta. Haddii tan ugu dambeyntii la bixiyo waa bangiga oo kali ah. Waxa kale oo laga yaabaa in lagama maarmaan noqoto in la codsado deyn labaad oo dheeraad ah haddii ay dhacdo in la joojiyo. Maanta waa dhammaan. Laakiin nasiib daro, marwalba waxaa la socda dadaal badan. Maalgelinta dib u dhiska waa in la codsadaa sida ugu dhakhsaha badan. Haddii tani ay dhacdo goor dambe oo dhismaha aan la bixin karin mar dambe, ka dibna waxay keeneysaa dhib weyn. Tani waa in laga fogaadaa ilaa intii suurtagal ah. Maanta, dadka intooda badani waxay doonayaan inay iska ilaaliyaan dhibaatooyinka oo dhan, dadkuna waxay doonayaan inay caawimo helaan. Waxay doonayaan inay diyaar u noqdaan mashruucooda.
Isgaarsiinta bangigu waa muhiim
Waa inaad la xiriirtaa bangigaaga sida ugu dhakhsaha badan haddii aad qabto dhibaatooyin noocaas ah. Shaqaalaha Baanka ayaa awoodi doona inay ka jawaabaan dhammaan su'aalahaaga. Sidaas darteed waxaad si dhab ah u hubineysaa inaad si dhaqso ah u socon doonto. Caawinaad ayaa kaalin weyn ka ciyaareysa maanta, waxaana sidoo kale isticmaala inta badan dhisayaasha. Laga bilaabo bilowgii, waa inaad si taxadar leh u bixisaa si aad uga fogaato wixii maaliyad dheeraad ah. Waxaad u baahan tahay in aad ogaato in aysan ahayn kaliya mid saafi ah lacagta amaah laakiin xiisaha ayaa sidoo kale ku jira. Caadi ma ahan waqti kordhin mudada dheer. Heerarka ayaa la cusbooneysiiyaa waxaana la kordhiyaa haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah. Laakiin tani waxay sidoo kale noqon kartaa faa'iido daro. Sababtoo ah haddii aadan bixin karin qaybaha ka hor maalgelinta kadib, ka dibna ma hagaajin doono maalgelinta kadib. Waxaad arki doontaa haddii aad awoodi kartid. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u tagto bangi gaar ah. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad kalsooni u hesho oo aad ka ogaatid bilawga inuu shaqeynayo. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad hubisaa inaad awoodid inaad ballan la sameyso lataliyahaaga bankiga. Qof kasta oo u baahan baahida maal-gashiga kadib waa inuu u isticmaalaa bangiga, kaas oo sidoo kale oggolaaday amaahda. Tan sida caadiga ah waa la qabtaa si fiican, sababtoo ah maaha inaad mar labaad ku soo celiso dukumiintiyada. Si kastaba ha ahaatee, midna waa inuu xisaabiyaa. Sababtoo ah dadkani waxay rabaan in ay si dhab ah u hubiyaan in lacagtooda ay sidoo kale kufaraxsan tahay iyo sidoo kale waa hubaal. Sidaa darteed waad ku hubsan kartaa inaad ka soo degtay talabixiye wanaagsan. Ma awoodi doontid inaad ogaatid in dib-u-habeynta maalgelinta. Sidaas awgeed waa inaad u dulqaadataa.
Xidhiidhada la xiriira:
Qiimee maqaalkan: 1.002.003.004.005.00
Dib u eeg dib u dir
Looma baahna codad.
Fadlan sug ...
lacag kala iibsiga
Maqaalka horeWicitaan credit
XIDHIIDHKA AASAASIGA AHKALA DUWAN MAS'UULKA
AC dhimista credit
dulsaarka isku bedelasho
Aqoon qoto dheer About ah NGO-
iSearch waa mashiinka raadinta internetka oo loogu talagalay waxyaabaha waxtar leh. Waxaan u qornaa hagitaanno iyo dib u eegis ku saabsan badeecada iyo adeegyada si aad si wanaagsan ula socotaan.
Nagala soo xiriir: [Email ilaaliyo]